आधुनिक बाल Biolaminirovanie - सौन्दर्य र विलासिता चम्कने टूटने!
आजकल, व्यावसायिक सैलून को हेरविचार लागि विभिन्न सेवाहरू प्रदान रंग,: बाल काटन, र अन्य biozavivka। बाल लागि सबै गर्व को वस्तु भए। तर प्रायजसो यी प्रक्रियाहरु अत्यन्तै हानिकारक हो, र आफ्नो बारम्बार प्रयोग मात्र संरचना र को naturalness बिगार्न ल्याउँछ। कपाल को हेरविचार को क्षेत्र मा नवीनतम नवाचारै को एक Biolaminirovanie मानिन्छ।
Biolaminirovanie बाल के हो?
जापानी वैज्ञानिकहरूले विशेष एजेन्ट जसको कार्य आयनों raznozaryazhennyh को अन्तरक्रिया आधारित छ, विकास छ। Biolaminat - जेल केश enveloping। मोती निकाल्ने, प्राकृतिक सेलूलोज र तरकारी मूल अन्य पदार्थ: यो केवल प्राकृतिक सामाग्री हुन्छन्। Biolaminat hypoallergenic बिना गंध मतलब गर्न भन्छिन्। प्रक्रिया समयमा, सबै दोष र प्रत्येक बाल भरिएको biolaminatom को खुरदरापन। फलस्वरूप, तिनीहरूले extraordinarily सुन्दर चमकदार चम्कने बन्न र थप स्वस्थ हेर्न। यसबाहेक, biolaminata प्रयोग स्थिर बाल रंग दिन सक्छ।
पारदर्शी बाल Biolaminirovanie
प्रक्रिया कारण अवशोषण बाल जेल गर्न मात्रा मा वृद्धि प्रदान गर्दछ। जम्मा सुरक्षा फिलिम यो चमकदार र लचिलो बनाउँछ। भइरहेको जेल भरिएको, बाल थप व्यवस्थित कम भ्रमित हुन्छ र नरम रेशम जस्तै लाग्छ। Biolaminirovanie प्रक्रिया तपाईं भरपर्दो स्टाइल हेयर ड्रायर को एक श्रृंखला गर्न अनुमति दिन्छ। कुनै पनि Hairstyles लागि, कुनै चिस्यान हस्तक्षेप छैन।
रंग कपाल गर्न रंग प्रतिरोध र बाल Biolaminirovanie दिन्छ। नोक्सानी सम्भव छैन, प्रक्रिया प्रयोग गर्दा केश breathable सामाग्री प्राकृतिक मूल को मात्र उपयोगी पदार्थ समावेश भरिएको देखि छ। biolaminata को मद्दतले अब रहन्छ र रूपमा तिनीहरूले जेल संग छैन आउँछन् रूपमा लामो रंग बन्द धुन छैन। उहाँले बिस्तारै महिनाको आवेदन पछि अन्त मा पानी उपचार को प्रक्रिया मा दूर धोए।
सलोनियां सधैं Biolaminirovanie बाल गर्नु पर्छ। को illuminators गर्न कारण भएको क्षति, स्पष्ट र biolaminat मात्र तिनीहरूलाई प्राकृतिक चम्कने फर्कन, तर पनि कारण therein समावेश पोषक गर्न क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्स्थापना।
रंगीन कपाल biolaminirvanie
प्रक्रिया पनि पारदर्शी biolaminirvoanie जस्तै गुण छ। तर अलग्गै गर्दा हानि कारण छैन आफ्नो निष्ठा कायम राख्न र, रंग, बाल रंग परिवर्तन को संरचना गर्न, थपियो। पछिल्लो "आयन" जापानी वैज्ञानिकहरु को विकास कपाल Biolaminirovanie को रंग को एक आवधिक पुनरावृत्ति हासिल जो, एक लामो समय को लागि रंग बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यो रंग जेल लगभग 3-6 हप्ता आयोजित गरिन्छ कि मनमा गर्न आवश्यक छ।
एक इच्छित बाल रंग बढी बारम्बार परिवर्तन को संभावना, साथै एक लगातार खैरो कवरेज छलफल biolaminata लाभ को। को रंग को अन्य गुण थपेर बाल जेल मा लाभकारी प्रभाव हानि गर्दैन।
Biolaminirovanie लागि हालतमा प्रयोग गरिएको जापानी अर्थ लेबल प्रसाधन। प्रक्रिया पनि भित्री को आगन्तुक एक लक्जरी स्वास्थ्य र चमकिलो बाल हुन्छ जो पछि 25-30 मिनेट लिन्छ।
Biolaminirovanie बाल - प्रक्रिया छैन सस्तो, 2,000 छोटो कपाल लागि rubles छ। यो केवल राम्रो-स्थापित सैलून छ पकड। तपाईं एक सस्ता विकल्प biolaminirvoaniya प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भने, हरेस! यस मामला मा, तिनीहरूले बाल प्राकृतिक मूल संरचना, जापानी कम्पनी र इच्छित प्रभाव दिनुहुन्छ मात्र होइन जो एक रासायनिक एनालग द्वारा डिजाइन र साथै, र हानि प्रयोग गर्ने छैन। ठगी को शिकार नबन्न, सम्झना - बाल Biolaminirovanie पुनर्गठन जेल प्रयोग समावेश गर्दैन, यो पतला र प्याकेजिङ्ग सिधै डिटर्जेंट लागू छैन।
नयाँ विकासक्रम चमत्कार गर्ने अनुमति! तिनीहरूलाई स्वास्थ्य बनाउन असाधारण सुन्दर चम्कने र चमक दिन, कम्तिमा 10% द्वारा कपाल मात्रा बढाउन सक्छ biolaminirovnie जो कोहीले प्रयोग गरेर।
Eyebrows घर बांधन वा कति सुन्दर अलिकति मोड्नु संग गर्न?
एक कर्लिंग कपाल सीधा कसरी चयन गर्ने?
कम्पनी उत्पादनहरू 'Inneov'। समीक्षा, अध्ययनहरू
कसरी घर मा laminating बाल के: सिफारिसहरू
बाल बाम बाल मास्क: सुविधा र छनौट सुझावहरूको
लक्षण, उपचार र रोकथाम: प्रसब पछि कुकुर मा Eclampsia
कसरी सीएस मा अनन्त grenades प्रशिक्षण लागि जाने बनाउने?
निष्ठा - यो के हो? अर्थ
अलेक्जेन्डर Prokopiev: विवादास्पद Duma उप
प्रतिनिधि - यो प्रभावकारी र लाभ
मारियो Suarez: मिडफिल्डर "भ्यालेन्सिया" र स्पेन
सर्वश्रेष्ठ टूरिंग बाइक: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, मोडेल र समीक्षा